Taalibaan Oo Hanjabaad Culus U Dirtay Madaxda Afghanistan – somalilandtoday.com
Taalibaan Oo Hanjabaad Culus U Dirtay Madaxda Afghanistan
(SLT-Kabul)-Kooxda Taalibaan ayaa wacad ku maray inay weerarro dheeri ah la beegsaneyso madaxda dowladda Afghanistan, maalin kaddib markii wasiirka gaashaandhigga dalkaas uu ka badbaaday isku day dil, iyagoo sheegay in dagaalkoodu ku wajahanyahay sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalooyin badan oo go’doonsan.
Weerar loo adeegsaday bam iyo rasaas oo lagu qaaday Wasiirka Difaaca Bismillah Mohammadi habeenimadii Salaasadii ayaa markii ugu horreysay muddo bilooyin ah sababay dagaal ka billowday magaalada caasimada ah.
Laakiin dagaalku wuxuu ka socday baadiyaha tan iyo bishii May, markii ciidamada shisheeye ay billaabeen heerkii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka oo lagu wado in la soo afjaro dabayaaqada bishan.
Ciidanka Afghanistan wuxuu sheegay in markii ay billaabatay duqeynta diyaaradaha in 200,000 oo qof oo magaalada ku nool ay ka guuraan Salaasadii, waxaana Saleh Mohammad oo ka mid ah dadka deegaanka uu sheegay in boqolaal qoys ay ka qaxeen magaaladaas.
“Ma jirto waddo aan uga baxsan karno aagga dagaalka, sababta oo ah dagaalku wuu socdaa. Ma jirto wax dammaanad ah oo aan u heysanno inaan jidka nalagu dili doonin,” ayuu yidhi Mohammad.